Akụkọ - Soro Ndepụta Higg
Jikọọ na Ndekọ Higg
Mepụtara site na Nkwado Uwe Na-adịgide adịgide, Higg Index bụ nnukwu ngwaọrụ nke na-enyere ụdị, ndị na-ere ahịa, na akụrụngwa niile aka - na ọkwa ọ bụla na njem nkwado ha - iji tụọ ma tụọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ arụmọrụ arụmọrụ nke ọma. Ndepụta Higg na-ewepụta nkọwa zuru oke nke na-enye ndị azụmaahịa ikike ime ezigbo ndozi nke na-echekwa ọdịmma nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị obodo na gburugburu ebe obibi.
Ngwaọrụ Higg Facility na-atụle mmetụta nkwado gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ nrụpụta gburugburu ụwa. Enwere Higg Facility Ngwaọrụ abụọ: Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) na Higg Facility Social & Labour Module (Higg FSLM).
Arditụle nha nke Mmetụta Ọha na Ahụhụ na akụrụngwa
Uwe, akpụkpọ ụkwụ, na akwa akwa na-ewere ọnọdụ na ọtụtụ puku ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Facilitylọ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ dị mkpa na nkwado nke ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaọrụ Higg Facility na-enye nyocha mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ebe obibi nke na-akwado mkparịta ụka n'etiti ndị mmekọ ọnụ ahịa bara uru na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ebe obibi na-eme ka ọkwa ọ bụla dị elu na usoro uru ụwa.
Ego gburugburu maka imepụta na iyi akwa dị elu. Makingme ụdị jeans nwere ike ịchọ ihe ruru galọn mmiri 2,000 na ike 400j nke ike. Ozugbo ịzụrụ, ilekọta otu ụzọ jeans ahụ n'oge ndụ ya niile nwere ike ịpụ karịa kilogram 30 nke carbon dioxide. Nke ahụ bụ ịnya ụgbọ ala 78 kilomita.
Igwe Igwe Igwe Gburugburu Higg (Higg FEM) na-agwa ndị nrụpụta, ụdị, na ndị na-ere ahịa gbasara arụmọrụ gburugburu ebe obibi nke ụlọ ọrụ onye ọ bụla, na-enye ha ike ịbawanye nkwalite nkwado.
Higg FEM na-enye akụrụngwa ihe osise doro anya banyere mmetụta gburugburu ebe obibi ha. Ọ na - enyere ha aka ịmata ma bute ụzọ dị mkpa maka mmelite arụmọrụ.
Glọ Ọrụ Higg Social & Labour Module
Onye ọ bụla kwesiri ịrụ ọrụ na gburugburu ebe nchekwa na ahụike ebe a na-akwụ ha ezigbo ụgwọ. Iji meziwanye ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ndị ọrụ na-emepụta ọtụtụ ijeri uwe, textiles, na akpụkpọ ụkwụ kwa afọ, ụdị na ndị nrụpụta kwesịrị ibu ụzọ tụọ mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ụlọ ọrụ ụwa.
Higg Facility Social & Labour Module (Higg FSLM) na-akwalite ọnọdụ mmekọrịta na nchekwa na enweghị ọhaneze na ndị ọrụ bara uru n'ụwa niile. Ilitieslọ ọrụ nwere ike iji nyocha a gbatara iji ghọta ebe ọkụ ọkụ ma belata ike ọgwụgwụ nyocha. Kama ilekwasị anya na nrube isi, ha nwere ike iwepụta oge na ihe onwunwe iji mee mgbanwe usoro na-adịgide adịgide.
Nọgide na-esonyere HIGG iji nweta nyocha onwe onye nke na-enyere ụlọ ọrụ aka inyocha ụdị ihe, ngwaahịa, osisi na-arụpụta usoro na usoro nhazi n'ime ọnọdụ nhọrọ gburugburu na ngwaahịa.
HIGG Index bụ ngwa akụkọ na-akwado nkwado nke ejiri ihe karịrị 8,000 na-emepụta na ụdị 150 n'ụwa niile. Ọ na-ewepụ mkpa maka nyocha onwe onye ugboro ugboro ma na-enyere aka ịchọpụta ohere iji melite arụmọrụ.
Post oge: Apr-05-2020